Beta 2 shanduro dzeTVOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa beta 2 vhezheni dzeTVOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevagadziri
Kana iyo Cupertino kambani ikaisa iyo yakanangana neshanduro dze beta hapana chekuita uye nhasi iri svondo kubvira yekutanga beta vhezheni yevagadziri, saka vatove ne yechipiri beta vhezheni yeTVOS 13.3 uye watchOS 6.1.1.
Mune ino kesi zvine musoro shanduro yechipiri inowedzerwawo iOS 13.3 uye iPadOS 13.3 beta saka isu tinotarisira kuti beta 2 shanduro dzeMacOS Catalina dzichaburitswa mangwana. Chero zvazvingaitika, vagadziri vane mukana wekukanganisa neidzi vhezheni vachitsvaga nhau uye zvinogona kuita zviputi.
Mune idzi nyowani beta vhezheni iyo Cupertino kambani inowedzera iyo yakajairika kuvandudzwa mukuita uye kugadzikana kweiyo OS dzakasiyana, nekuti izvozvi zvinoita sekunge kuti havana shanduko huru zvichienzaniswa neshanduro yapfuura yakaburitswa vhiki rapfuura, saka hatisi kutarisana neshanduro izvo zvinoita sekunge zvichagadzirisa izvo matambudziko avari kusangana nawo mukuzvitonga vamwe vashandisi ve iPhone ne iPad. Ndinovimba shanduro dzinotevera dzichagadzirisa matambudziko uye pakupedzisira dzizosvika iyo yekupedzisira vhezheni nezvose zvakagadziridzwa kusvika pakakwirira.
Semazuva ese, hazvikurudzirwe kuisa mabheta pane zvishandiso patinoita chikamu chakakosha chebasa redu kana chine ruzivo rwakanangana nekukanganisa kurasikirwa, senge magwaro, mifananidzo, nezvimwe. Zvakanakisa kumirira veruzhinji beta vhezheni kana kuisa aya mabheji pane zvishandiso zvisiri izvo zvakanyanya, mune iyo Apple Watch rangarira kuti hapana kudzokera kumashure uye kuti zvinoda kumisikidzwa pane iyo iPhone kuti ienderane saizvozvo zvirinani ugare kunze kwemabheas aya kunzvenga matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa beta 2 vhezheni dzeTVOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevagadziri
Bvisa data rese reEXIF kubva kumifananidzo yako neichi chishandiso
Zvikamu zvitsva zveOna, Iyo Mangwanani Show uye YeVanhu Vese paApple TV +